Jadwalka Excel Hababka iyo Jaartarka Jajabyada Qorshaha Microstation - Geofumadas
Jaan-goyska Qorshaha Maaraynta Maaraynta iyo Maaraynta Miisaanka
Janaayo, 2008 Microstation-Bentley
Waxaan bilaabay dhowr maalmood kahor ka hadalka sidan sidan u sameyn laheyn, laakiin waxaan sameyneynaa isku xirnaansho Excel for AutoCAD ama a CSV ilaa Microstation; labada jihooyinka iyo isku-duwayaasha. Laga soo bilaabo halkaas Qaar ka mid ah shaki ayaa kacay Haddii aad qabto wax codsi ah in aan u baahnayn, Jinka nuqul, laakiin la macaamilaan Excel ah jarida iyo halkii dhibcood ahbaa khadadka, ka dib markii raadinaya daal ayaan ahay, oo sida xaqiiqada ah waxaa jira mdl badan oo Microstation iyo carrab la'aan waayo AutoCAD ... nasiib darro ma aanan helin badan ... shaqeeyo
Kaliya waxaan heli karo waa codsi lagu sameeyay Visual Basic for Moicrostation V8 loo yaqaan Rumbosdisttoexcel.mvba, waad ka soo dejisan kartaa qaabka jipka halkan.
1 Sida loo raro
Ka dib markaad soo dejisid waa inaad iska furto
Si aad u sameysid waxaad sameyneysaa kuwan soo socda: Adeegyada / Macro / Mashruuca mashruuc / mashruuc / waxaad raadineysaa codsiga meesha aad ka badbaadisay / kadibna waxaad doorataa ok
2 Sidee loo fuliyaa
Markaad ku dhejiso, waxaad ka doorataa Mashruuca Mashruuca oo aad ku daboosho badhanka buluuga «macruuf»
Markaas waxaad dooranaysaa codsiga «RunApplication.runMainMenu»
Waxaad codsan kartaa badhanka «orodka»
iyo guddi sidan oo kale ah ayaa u muuqda
3 Waa maxay codsiga
Arjigaan wuxuu leeyahay laba hawlood, labaduba waxay la shaqeeyaan Microstation Geographics.
Ku dhoofinta Excel, tanina, samee xayndaab oo ku dheggan qaab-dhismeedka, kadibna dooro Xulashada Ganacsiga
Tani waxay soo saartaa faylka Muuqaalka, halkaas oo ah meelaha, meelaha fog iyo iskudhaca UTM ay kala tagaan.
Isla mar ahaantaana wuxuu meelo kala gedisan u jeedinayaa garbaha laga bilaabo kan ka sii weyn dhinaca koonfur-galbeed.
Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso khadka, xogta ku jirta Muuqaalka waxaad dib u dhisi kartaa baqshadaynta.
Fiidyowgan tus sida loo shaqeeyo
Haddii qof doonayo inuu isku dayo, soo qaado oo ogow haddii ay ku siiso dhibaatooyin ... naxariis leh VBA waa lambar sir ah, haddii qof uu ku dhaco inuu jebiyo ... waxaa suurtogal ah in la siiyo awood dheeraad ah.
Waxaan fahamsanahay inay tahay inay la shaqeyso Microstation caadiga ah, inkasta oo ay u baahan tahay Microstation Geographics mashruuc furan, ama. Ma aha iyo in ay la socoto tifaftiraha Visual Basic ee Microstation waa inay awoodaan inay ka saaraan qaybta ... dabcan waxaa lagaa rabaa inaad jabiso furaha erayga.
Isku day oo u sheeg
Qofka waa inuu ogaadaa sida loo tuuro sirta, sababtoo ah codsigu aad ayuu u kulul yahay
Haddii uu qof og yahay codsiga, waa la soo dhaweynayaa
Post Previous«Previous Bentley Discussion Forums
Post Next Backgammon OnlineNext »
7 Jawaab "Miiska Meelaha iyo Meelaha Aaladaha Interacting with Microstation"
Elipotgram isagu wuxuu leeyahay:
July, 2013 at
Qof baa ii sheegi kara haddii ay soo dejiyeen miyir-qabadka? ama xaggee baan ka heli karaa? waad ku mahadsan tahay wax badan
Erick Lopez isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2013 at
Hambalyo! Bog aad u fiican. wada tashi dhammaan. Qofna miyuu ku dhacaa arjigaan? Xaqiiqadu waxay tahay in ay sheegeyso in aad ka soo dejisan karto halkan laakiin sida muuqata xiriirku ma shaqeynayo. Waxaan rajeynayaa inaad iga caawin kartid tan.
salaan ka soo baxa chile
antony isagu wuxuu leeyahay:
kaalmo aad u wanaagsan
Abriil, 2011 at
Waxaan maqlay in ay dhibaato ku heysato Microstation XM, Anigu ma tijaabin V8i, laakiin waa inay ganaaxaan.
Shamo isagu wuxuu leeyahay:
Salaan iyo hambalyo ku saabsan bogga.
Anigu waxaan la qabatimay ... bogga.
Ma la shaqeeyaa Microstation v8i?
Nofeembar, 2009 at
Oo miyaad horey u isticmaashay XM?
Waa inay noqotaa dib loo soo celiyo, badhkeedna waa adag tahay.
Agustin Ortega isagu wuxuu leeyahay:
Hello G! sidee qalabkani waa mid aad u fiican Waxaan u isticmaalaa wax badan ... laakiin ma shaqeynayo Microstation V8i XM ... miyaa la ii soo bandhigi karaa casriyeynta?